Zimbabwe's Mnangagwa shrugs off fresh US economic sanctions - The Zimbabwe Mail
HomeMainZimbabwe’s Mnangagwa shrugs off fresh US economic sanctions
HARARE – President Emmerson Mnangagwa says the new dispensation remains committed to the engagement and re-engagement policy with the international community despite the continued renewal of illegal sanctions imposed by the West on Zimbabwe.
The President was speaking when he bade farewell to Zimbabwe’s ambassadors to Washington DC, Geneva and Brussels in Harare this Thursday.
The three ambassadors who held a briefing with President Mnangagwa at State House ahead of their diplomatic missions are Mr Tadeous Chifamba assigned to Washington DC, Mr Stuart Comberbach appointed the new permanent representative to the United Nations in Geneva, Switzerland and Mr Amon Mutembwa deployed to Brussels Belgium.
After a closed-door meeting with the President, the three envoys had a common view on the renewal of illegal sanctions by US President Joe Biden saying it was uncalled for – considering the commitment by the new dispensation on engagement and re-engagement policy.
The three ambassadors believe that their diplomatic mission to the three powerhouses of the western nations will open room for constructive dialogue that will promote and revitalise favourable bilateral and multilateral relations between Zimbabwe and the outside world.
United States President Joseph Biden has renewed economic sanctions imposed in 2003, saying there are no tangible economic and political reforms in Zimbabwe.